One. Wai Crop Financing ကို ခြောက်လအတွင်းအပြီးအစီး စုစုပေါင်း ဘဏ္ဍာငွေ သန်း ၁၀၀ နီးပါးခန့် - Pandaily
One. Wai Crop Financing ကို ခြောက်လအတွင်းအပြီးအစီး စုစုပေါင်း ဘဏ္ဍာငွေ သန်း ၁၀၀ နီးပါးခန့်
Categories: Startups ကိုPandaily စက်တင်ဘာ 22, 2021 စက်တင်ဘာ 22, 2021 မှာ Posted
Shenzhen အေျခစိုက္ တရုတ္နည္းပညာကုမၸဏီ One. AI က ဗုဒၶဟူးေန႔ကေၾကညာခဲ့ျပီး ကုမၸဏီရဲ႕လုပ္ငန္းအဆင့္စီမံခန္႕ခြဲမႈစနစ္ေတြကို အဓိကထားေလ့လာခဲ့ပါတယ္။ေဒၚလာ သန္း ၅၀ တန္ေၾကးရွိ C Wheel Financing ကို ၿပီးစီးေအာင္ ျပဳလုပ္ၿပီးခဲ့တဲ့ ဇြန္လကုန္ေလာက္ကပဲ ကုမၸဏီဘက္က ေၾကညာခ်က္တစ္ေစာင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသးတယ္လို႔B1 နဲ့ B2 နှစ်ဘီးပြီးစီးနေပြီဖြစ်ပြီး နောက်ထပ်ဘဏ္ဍာငွေ ယွမ် သန်း ၃၀၀ တန်ဖိုးရှိပါတယ်(၄၆၃၇.၁ သန်း)။
လက်ရှိ Bottle Financing ပါတီမှာ GIC က ဦးဆောင်နေပြီး ယခင်က ရှယ်ယာရှင်များက Code of Capital နှင့် XVC သုံးဘီးကားများတွင် အစွမ်းကုန် တက်ရောက်နေကြပြီ ဖြစ်သည်။
ဒီကုမၸဏီဟာ တတိယအ ႀကိမ္ ဘ႑ာေရးႏွစ္ကို ေျခာက္လ ဆက္တိုက္ ခြင့္ျပဳထားၿပီး စုစုေပါင္း ဘ႑ာ ေငြ သန္း ၁၀၀ နီးပါး ရရွိမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု လုပ်ငန်းတွေကတော့ 5Y Capital, Short-room, Rider Capital, XVC, Source Code Capital, GIC နဲ့ တခြား ပြည်တွင်းနဲ့ ပြည်ပက နာမည်ကြီး Fund တွေ ဖြစ်ပါတယ်။
ကုမၸဏီမ်ားသည္ သုေတသနႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲေရးစနစ္နယ္ပယ္တြင္ စုၿပံဳကာ ျပည္တြင္းေငြေၾကးပမာဏအမ်ားဆံုးႏွင့္ အလ်င္ျမန္ဆံုးစံခ်ိန္တင္ထားသည့္ ဘ႑ာေရးနယ္ပယ္တစ္ခုလည္း ျဖစ္သည္။
Topics: မြင်ကွင်းတရုတ္စက္ရုပ္ဂိုေဒါင္ တည္ေဆာက္တာေတြကို HAI Robotics က ရန္ပံုေငြ ေဒၚလာ သန္း ၂၀၀ ရယူ
One. Wai တည်ထောင်သူနှင့် CEO Wang Zi Chi Yi က “ကျမတို့ delop အနေနဲ့ တရုတ်နည်းပညာကုမ္ပဏီတွေရဲ့ လိုအပ်ချက်တွေကို လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင် သုတေသနပြုတဲ့ စီမံခန့်ခွဲရေးစနစ်၊ ဖောက်သည်ကြီးတွေ များပြားတဲ့ အလွှာပေါင်းစုံရဲ. ဝန်ဆောင်မှုတွေကို လုံလောက်တဲ့ ငွေကြေးထောက်ပံ့မှု ရရှိပြီးတဲ့နောက်မှာ ကျမတို့ အင်တိုက်အားတိုက် ခေါ်ယူသွားမှာပါ၊ ကျမတို့ လုပ်ငန်းထဲကို ပါရမီရှိတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေ ဝင်လာမယ်၊ ကျနော်တို့ရဲ့ ထုတ်ကုန်တွေကို အဆင့်မြှင့်တင်ဖို့၊ ဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုတွေကို မြှင့်တင်ဖို့၊ လူမှုတာဝန်တွေကို ထမ်းဆောင်ဖို့ တက်ကြွစွာ လုပ်ဆောင်သွားမှာပါ” ဟု ပြောသည်။
ONES.AI ကို ၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင် စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး ယခုအခါ ပြည်တွင်းတွင် ဦးဆောင်လာကြောင်း သုတေသနနှင့် စီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာ ဖြေရှင်းချက်ပေးသူ ပညာရှင်ရှစ်ဦး ပိုင်ဆိုင်သည့် သုတေသနနှင့် စီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာ ထုတ်ကုန်များ တီထွင်ထုတ်လုပ်ရေး Software ဖြင့် ဘဝသံသရာပြည့်နေသည်။ ၂၀၂၀ မှာ ကုမဏီက ဝယ်ယူထားတဲ့ တရုတ်နာမည်ကြီး Tooer အဖွဲ့နဲ့ ပူးပေါင်းပြီး Tower Project Management Scene ကို One Stop Solutions အဖြစ် ပေးအပ်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
လက္ရွိတြင္ ONES.AI Customer Cover တြင္ Xiaomi, China Telecom, Guizhou Moutyouth, Aura Group, Exchange Fund Management, Wave Software စသည္တို႔ ပါဝင္ၿပီး ကုမၸဏီေပါင္း ၅၀၀ ေက်ာ္ရွိသည္။
Tags: financing | Funding | management | research & development
Zhenyun Technology သည် VC Dragon Ball Capital မှ ဦး ဆောင်သော ယွမ်သန်း ၆၅၀ ကို C အလှည့်ကျ ငွေကြေးထောက်ပံ့ မှုကို ပြီးစီး ခဲ့သည်
နို ၀ င်ဘာလ ၂၆ ရက်နေ့တွင် ဒစ်ဂျစ်တယ် ၀ ယ်ယူ ရေး ၀ န်ဆောင်မှုပေး သူ Zhenyun Technology သည်အမေရိကန် ကော်ပိုရေးရှင်း လက်အောက်ရှိ အကျိုးတူ အရင်းအနှီး ရန်ပုံငွေ ဖြစ်သော Dragon Ball Capital မှ ဦး ဆောင်သော C ရန်ပုံငွေ ယွမ်သန်း ၆၅၀ (အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၀၂ သန်း) ပြီးစီး ကြောင်းကြေငြာခဲ့သည်။
Sequoia China ၏အမှုဆောင်အရာရှိချုပ် ဟောင်း Cao Xi သည် ကျောက် သား စီမံခန့်ခွဲမှု ကုမ္ပဏီ ကိုတည်ထောင် ခဲ့ ပြီး၎င်း ၏ပထမဆုံး ရန်ပုံငွေ မှာ ဒေါ်လာသန်း ၅၀၀ ကျော် ခဲ့သည်
ကိုPandaily Nov 26 Nov 29 မှာ Posted
Sequoia China ၏ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် ဟောင်း Cao Xi သည် Boyu Capital ၏ဒုတိယ စျေးကွက် မိတ်ဖက် ဟောင်း Tim Wang နှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု စီမံခန့်ခွဲမှု အေဂျင်စီ Monolith Management ကိုပူးတွဲ တည်ထောင် ခဲ့သည်ဟု သောကြာ နေ့တွင် ကြေငြာခဲ့သည်။
ဒေတာ လုံခြုံရေး ကုမ္ပဏီ Quanzhi Technology သည် ယွမ်သန်း ရာနှင့်ချီ သော ရန်ပုံငွေ များရရှိ ခဲ့သည်
Hangzhou အခြေစိုက် ဒေတာ လုံခြုံရေး ကုမ္ပဏီ Quanzhi Technology က Rotary B ရန်ပုံငွေ ယွမ် သန်းပေါင်း ရာနှင့်ချီ ပြီး ပြီဟု သောကြာ နေ့တွင် ကြေငြာခဲ့သည်။
D2C ဖြေရှင်းချက် ပံ့ပိုး သူ Fastlane နီးပါး $10 သန်း Round A ငွေကြေး ပြီးစီး
Global Direct Consumer Oriented (D2C) Solution Provider Fastlane Technology က Baidu Ventures နဲ့ တောင်ကိုရီးယား LB Investment တို့ ဦးဆောင်တဲ့ Round A ရန်ပုံငွေ စုစုပေါင်း ဒေါ်လာ ၁၀ သန်း နီးပါး ရရှိ ခဲ့တယ်လို့ ကြေညာ ခဲ့ပါတယ်။
DJI သည္ ႏိုဝင္ဘာ ၁၅ ရက္တြင္ ျပဳလုပ္မည့္ မိတ္ဆက္ ပြဲတြင္ မ်ိဳးဆက္ သစ္ အပင္ ကာကြယ္ေရး ဒ႐ုန္း မ်ားကို မိတ္ဆက္
ကိုPandaily Nov 12 Nov 12 မှာ Posted
တရုတ်နိုင်ငံ၏ ထိပ်တန်း မောင်း သူမဲ့ လေယာဉ် ထုတ်လုပ်သူ DJI သည် နို ၀ င်ဘာ ၁၅ ရက် ၂၀း၀၀ နာရီတွင် "To the Farmers" ခေါင်းစဉ်ဖြင့် စိုက်ပျိုးရေး ထုတ်ကုန် အသစ်များ ကိုမိတ်ဆက် မည်ဟု တရားဝင် ကြေငြာခဲ့သည်။